जर्मन र colors्ग शीर्षक भएको यस लेखमा हामी जर्मनमा र colors्गका बारे जान्न सक्दछौं। हामी जर्मन रंग र टर्की देख्न सक्छौं, जर्मनमा सम्पत्ति, वस्तु र चीजहरूको र say्ग कसरी भन्न सकिन्छ जान्ने छौं।
जर्मनमा र colors्गहरूको विषय सामान्यतया कण्ठमा आधारित हुन्छ र यो दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने जर्मन र colorsहरू पहिलो स्थानमा याद गर्न पर्याप्त हुन्छ।
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, अस्तित्वहरूको राज्यहरू, तिनीहरूको रंग, फारम, संख्या, अर्डर, स्थान, आदि। शब्दहरू जसले तिनीहरूको विशेषताहरू स indicate्केत गर्दछ विशेषण भनिन्छ। नीलो कलम, रातो बेलुन, तातो चिया, ठूलो तालिका, छिटो रेल, ठूलो वाक्य जस्तै वाक्य निलो, रातो, न्यानो, ठूलो, छिटो, चौडा शब्दहरू विशेषण हुन्।
यसको मतलब रंगहरू पनि विशेषणहरू हुन्। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, नामको आद्याक्षर जर्मनमा ठूला अक्षरमा लेखिएका हुन्छन्, विशेषणको आद्याक्षर ठूला हुँदैनन्। त्यसकारण, जब एक वाक्यमा जर्मन र writingहरू लेख्दछौं, हामी तिनीहरूको प्रारम्भिक ठूलो पार्दैन। उदाहरण को लागी रातो बाइक, निलो कार, पहेंलो स्याउ, हरियो कागती जस्तै शब्दहरूमा रातो, नीलो, पहेंलो, हरियो शब्दहरू विशेषण हुन्। यी विशेषणहरूले जीवहरूको र indicate्गलाई संकेत गर्दछ।
जर्मन रंग विषय दैनिक जीवनमा धेरै बार प्रयोग गरिएको हुनाले, यो विषयहरू मध्ये एक हो जुन राम्ररी कण्ठ गर्न र सिक्नुपर्दछ। जब हामी प्राणीहरूको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी प्राय: तिनीहरूको रंगहरू उल्लेख गर्दछौं। उदाहरण "त्यो रातो के तपाईं कारको छेउमा रूखमा हेर्नुहुन्छ? कति सुन्दर!","नीलो के तपाईं खेलौनालाई अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ?हामी वाक्यांशको उदाहरण दिन सक्छौं "।
हामीले अघिल्लो पाठमा देखेका छौं जर्मन भाषाको अगाडि जर्मन जर्मन भाषामा सिग्नलहरू कसरी प्रयोग गर्ने।
अब तपाई जर्मन रंग र टर्किक चित्रहरू तालिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ:
क्षय हुनु रातो
dunkelblau नौसेना नीलो
नरक उज्ज्वल, स्पष्ट
hellrot हल्का रातो
dunkelrot गाढा रातो
weinrot क्लारेट रातो
जर्मनमा र colors्गको शीर्षक सिक्दै गर्दा, तपाईंले पहिले महत्त्वपूर्ण र learnहरू सिक्नुपर्नेछ, अर्थात् मुख्य र colorsहरू। तपाईको इच्छा अनुसार पछि तपाईले कम प्रयोग गरिएको मध्यवर्ती र learn्ग सिक्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, हामी रातो, पहेलो, निलो, सेतो, कालो, सुन्तला, गाढा निलो, खैरो जस्तो रंग प्रयोग गर्न को लागी धेरै जसो प्रयोग भएको जर्मन रंगहरूको उदाहरण दिन सक्छौं।
जर्मन र colorsको सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिनको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको र color्गको नामको प्रारम्भिक लोवरकेसमा लेख्नुपर्दछ
तपाईलाई थाहा छ, जर्मनमा सबै नामको आद्याक्षर ठूला छन्।
अर्को शब्दमा, यो उचित नाम हो वा जीनस नाम हो, सबै नामको आद्याक्षर वाक्यमा क्यापिटिज हुन्छन्। यद्यपि रंगहरू नाम होइनन्। रहरू विशेषणहरू हुन्। त्यसकारण, जर्मनमा वाक्यमा र color नाम लेख्दा, हामीले रंगको प्रारम्भिक अक्षर क्यापिटलाइज गर्न आवश्यक पर्दैन। किनकि विशेषणको सुरुवाती अंश ठूलो पार्नु आवश्यक छैन।
जे होस्, यदि हामी पोइन्ट पछि र write लेख्छौं, यदि वाक्यको पहिलो शब्द रaहुनेछ, तब देखि हरेक वाक्य क्यापिटल अक्षरबाट सुरु हुन्छ, वाक्यको पहिलो शब्द भनेको र name्गको नाम हो, यो अर्को विशेषण भए पनि, यो ठूला अक्षरमा लेखिएको छ। अब, हामी हाम्रो छवि प्रस्तुत गर्दछौं जसलाई जर्मन र colors्गहरू भनिन्छ जुन हामीले तपाईंको लागि तयार गरेका छौं:
जर्मन रंग चित्रित
जर्मन नरक शब्द खुला छ, dunkel शब्द अन्धकार छ।
यदि हामी निर्दिष्ट गर्छौं कि रङ हल्का छ, उदाहरणका लागि जब हामी हल्का नीलो भन्छौं, नरक यो अँध्यारो छ भनेर संकेत गर्नुहोस् dunkel हामी शब्दहरू प्रयोग गर्दछौं।
नरक ब्लू: हल्का नीलो
डुङ्गाल ब्लाउ: गाढा नीलो
नरक ग्रीन: हल्का हरियो
dunkel grün: गाढा हरा
नरक घुमाउ: हल्का रातो
डंकल घुमाई: गाढा रातो
जर्मन रंगहरूका लागि नमूना कोडहरू
अब हामी हाम्रा लागि तैयार उदाहरणहरू र जर्मन रंगहरूको बारेमा नमूना वाक्यहरू हेरौं:
माथिल्लो छविमा, दास ist ein Apfel परिभाषा कोड हो।
Der Apfel ist gürün cümlesi को अंतर्गत रिसनम एक विशेष रूप देखि बयान हो जुन वस्तु को रंग को सूचित गर्दछ।
अंतर र परिभाषा शब्दावली र विशेष शब्द शब्दावली को बीच अंतर को ध्यान दिनुहोस।
माथिल्लो छविमा दास आइटी ईन नबोल्च वाक्यको परिभाषा हो।
डेभि Knoblauch ist weiß cümlesi पुन: सुरुवात अन्तर्गत एक विशेष बयान हो जुन वस्तुको रंग सूचित गर्दछ।
माथिल्लो छविमा, दास एट ईइन टोमेट परिभाषा कोड हो।
Die Tomate ist rotcülesi एक विशेषण क्लेन हो जुन वस्तुको रंग बताउँछ।
माथीका वाक्यहरुलाई लिखित रुपमा दिनु
एप्पल हरियो छ
लसुन सेतो छ
डाई टमाटे इस्टेट रट
टमाटर रातो छ
डाय Aubergine islalac
डाय Zitrone ist gelb
कागती पहेंलो छ
हामी फारममा लेख्न सक्छौं।
जर्मनमा, वस्तुहरूको रङहरू वा अन्य गुणहरू निम्न पद्धति प्रयोग गरी भनिन्छ, माथिको चित्रमा देखाईएको छ:
जर्मन र Color वाक्यांशहरू
माथिको ढाँचामा, हामी सहायक क्रियापद ist / sind प्रयोग गर्दछौं जुन हामीले पहिले देखिसकेका छौं, एकल वाक्यमा ist को रूपमा र बहुवचन वाक्यहरूमा sind को रूपमा। हामीले यस बारेमा हाम्रो अघिल्लो पाठमा जानकारी दियौं।
अब हामी माथिको ढाँचा प्रयोग गरेर केहि नमूना वाक्यहरू लेखेर हाम्रो जर्मन रङ्ग क्लास समाप्त गर्न सक्दछौं।
दास ओटो स्टार्ट घुमाउछ: कार रातो
दास ओटो छ gelb: कार लपेटो
मिर ब्लुम ist gelb: फूल फूल पहेंलो हुन्छ
ब्लाउन्ड म्यान sind gelb: फूल पहेंलो हुन्छ
जर्मन र रङहरू माथिको रूपमा वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ।
तपाइँले माथिल्लो ढाँचा प्रयोग गरी आफैलाई विभिन्न रङहरू र वस्तुहरू र विभिन्न प्रकारका सुरागहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं हाम्रो फोरममा जर्मन र colors्गका बारे आफ्नो राय, सुझाव, अनुरोध र प्रश्नहरू लेख्नुहुन्छ भने हामी खुशी हुनेछौं।
हाम्रो साइट मा जर्मन पाठ साथीहरु संग तयार छ जो बस दिमागमा जर्मन सिक्न को लागी शुरू गरीरहेको छ, र हाम्रो जर्मन पाठहरु को एक धेरै विस्तृत र बुझ्ने तरीकाले व्याख्या गरिएको छ।
तिमी पनि जर्मन रंग यस शीर्षकको बारे मा माथी उदाहरण वाक्य जस्तै बिभिन्न वाक्य बनाउन को लागी कोशिश गर्नुहोस्।
यस तरीकाले तपाई जर्मन र colors्ग अझ राम्ररी सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाई सजिलै बिर्सनुहुन्न।
हाम्रो शुभकामनाहरु संग ...
ट्याग: जर्मन रङ्ग नामहरू, जर्मन रङ्ग नामहरू, जर्मन रंग, जर्मन रंग र तुर्क, जर्मन टर्की रंग, अङ्ग्रेजीमा रंगहरू, रङहरू जर्मन, रंगहरूको अल्माशेस, टर्की जर्मन रंग